बिहेको पहिलो रा त भुलेर पनि नगर्नु यस्ता पाँच गल्ती नत्र पछुताउनु पर्ला ! - सिधा मिडिया
बिहेको पहिलो रा त भुलेर पनि नगर्नु यस्ता पाँच गल्ती नत्र पछुताउनु पर्ला !
२ पुष २०७८, शुक्रबार १९:४५ मा प्रकाशित
220 जनाले पढ़िसके
विवाहको दिन हरेक जोडीका लागि उनीहरुको जीवनको सबैभन्दा विशेष र अविस्मरणीय पलमध्ये एउटा हुन्छ ।
चर्चित लेखक डेव म्यूररले भनेका छन्, ‘एउटा राम्रो विवाह त्यो होइन जब ‘परफेक्ट कपल’ एकसाथ बस्छन्, राम्रो विवाह त्यो हो जब ‘इम्परफेक्ट कपल’ आफ्नो मतभेदको आनन्द लिन सिक्छन् ।’ विवाहको विषयमा पुरुष र महिलामा भिन्न भिन्न अपेक्षा र धारणा हुन्छन् । आफ्नो आगामी दाम्पत्य जीवनको विषयमा जो कोही पनि उत्सुक हुन्छन् र उत्कृष्ट सुरुवात गर्न चाहन्छन् । वैवाहिक जीवनको सुरुवात कसरी सही तरिकाले गर्ने र कस्ता गल्तीबाट बच्ने भन्नेबारे यहाँ जानकारी दिइएको छ ।
यौ’न स’म्ब’न्धको आशाः धेरैजसो महिला विवाहको दिन असाध्यै थाकेका हुन्छन् । यस दिन उनीहरुले भावनात्मक रुपमा पनि कमजोर महसुस गर्न सक्छन् । दिनभरीको विभिन्न क्रियाकलाप र पहिरनले पनि उनीहरुलाई स्ट्रेस दिइरहेको हुन्छ । दुलहीलाई मात्रै होइन, दुलहा पनि असाध्यै धेरै थाकेको हुनसक्छन् । त्यसैले विवाहको रात यौ’न स’म्ब’न्ध स्थापित गर्ने कुरामा जोड दिनुको साटो रिकनेक्ट हुने कुरामा ध्यान दिनुहोस् । एक–अर्कासँग कुरा गर्नुहोस् र आराम गर्नुहोस् ।
शरीरबारे सोच्न बन्द गर्नुहोस्ः विवाहको दिन आफ्नो शरीरमा धेरै ध्यान दिन बन्द गर्नुहोस् । तपाईं आफ्नो ब्राइडल ड्रेसको फिटिङको विषयमा चिन्तित हुन सक्नुहुन्छ । वा पार्टनरसँग परफेक्ट देखिने चिन्ताले पनि तपाईंलाई घेर्नसक्छ । शरीरमा यत्ति धेरै ध्यान दिँदा तपाईंलाई एन्जाइटी हुनेछ, जसले तपाईंको यो विशेष दिनलाई बर्बाद गर्न सक्छ । यदि तपाईं विवाहको रात इन्टिमेट भइरहनुभएको छ भने पनि यसको खराब असर त्यहाँ पनि पर्नेछ ।
यी कुरालाई तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्ः विवाहको रा’त यस्ता धेरै कुरा हुनसक्छन् जसले माहौललाई खराब पारिदिन सक्छ । तपाईंलाई ए’ल’र्जी हुनसक्ला । असाध्यै धेरै टा’उ’को दु’ख्न स’क्ला । पाचनको समस्या हुनसक्ला वा आफ्नो नियमित औषधी खान बिर्सनुहोला । यस्तो आपतकालीन स्थितिसँग जुध्नका लागि आफूसँग मेडिकल किट राख्नुहोस् । तपाईं कुनै साथी वा आफन्तको निगरानीमा यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ ता कि आवश्यक पर्दा तपाईंले यस्ता कुरा सहजै पाउन सक्नुहोस् ।
न’का’रात्मक फि’ड’ब्याक नदिनुहोस्ः वैज्ञानिक रुपमा यो प्रमाणित भइसकेको छ कि सकारात्मक विचार, शब्द वा व्यवहारले पार्टनरसँग तपाईंको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । ४७० जोडीमाथि गरिएको एक सर्वेक्षणको आधारमा युनिभर्सिटी अफ जेनेभाका साइकोलोजिस्ट मार्सेल जेन्टनरले रोमान्सलाई यथावत् राख्नका लागि पर्सनालिटीको कुनै विशेष स’म्ब’न्ध न’हुने तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । हामीले ती सबै चिजबारे कुरा गर्नबाट बच्नुपर्छ जसले पार्टनर, उसका साथी वा आफन्तको गल्तीलाई उजागर गर्छ । मनमा सकारात्मक विचार राख्नुहोस् र तपाईंसँग भन्नका लागि केही राम्रै कुरा होस् भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस् ।
मेमोरी क्रियट गर्न नबिर्सनुहोस्ः विवाहको दिन फोटोग्राफर र आफन्तले तपाईंको हरेक कदमलाई रेकर्ड गर्छन् । यी सबै यादलाई तपाईंले फोटो र भिडियोको रुपमा जीवनभर सजाएर राख्नुपर्छ । तपाईंले केही विशेष याद पनि बनाउन सक्नुहुन्छ जसले सधैं तपाईंलाई आफ्नो पार्टनरसँग किन विवाह गर्नुभयो भनेर स्मरण गराउँछ । भोलिका दिनमा कुनै कारणवश स’म्ब’न्धमा ति’क्त’ता आएको ख’ण्डमा पनि तपाईंलाई यी कुराले निकै मद्दत गर्छ ।
१. विवाहको दिन तपाईंले कुनै रुख रोप्न सक्नुहुन्छ । यो रुखले तपाईंको यादलाई जोडेर राख्नेछ । तपाईं यसमा केही अ’विष्म’रणीय मेसेज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ । २. कागजका केही टुक्रामा गोप्य मेसेज लेख्नुहोस् र त्यसलाई एउटा बोतलमा बन्द गर्नुहोस् । यो बोतललाई १० वर्षपछि खोल्नुहोस् र एक–अर्काका लागि लेखिएको मेसेज पढ्नुहोस् । यसलाई याद राख्नका लागि बोतलमा मिति पनि लेख्नुहोस् । ३. आफ्नो विवाहको निमन्त्रणा कार्ड र विवाहसँग जोडिएका विभिन्न कुरालाई फ्रेम बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई आफ्नो बेडरुमको भित्तामा टाँस्नुहोस् । यस्ता चिजलाई सजाएर तपाईं एउटा मेमोरी वाल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ ।